MUUSE BIIXI CABDI IYO TAARIIKH NOLOLEEDKIISA.. | Maalmahanews
MUUSE BIIXI CABDI IYO TAARIIKH NOLOLEEDKIISA..
October 13, 2017 - Written by admin
Mujaahid Muuse Biixi Cabdi Murashaxa jagada Madaxweyne Xisbiga Kulmiye doorashada 2017, waxa uu ku dhashay tuulo yar oo ku taal galbeedka magaalada Hargeysa dabayaaqadii sannadkii 1948. Malcaamaddii u horreysay ee Qur’aanka looga bilaabay waxay ahayd Macallin Jaamac, HEEGADA, Hargeysa. Waxa kaloo lagu daray Malcaamaddii Ina Sheekh Ibraahim Baraawe ee dooxa agtiisa.
Sannadihii 1959 ilaa 1966 waxa uu waxbarashadii dugsiga hoose/dhexe ku qaatay dugsiyada Biyo-dhacay iyo Biyo-dhacay dhexe.
1966 – 1970 waxa uu waxbarashadiisii sare ku qaatay Dugsigii sare ee Camud ee Boorama.
1970 – 1973 waxa uu shahaaddidiisa koowaad ee degree-ga ku bartay cilmiga ciidammada cirka iyo bayloodnimada (Military Air force and Pilot Training) oo uu ku qaatay Akadamiyada ciidammada ee Djembe oo ku taalay Karganistan ee dalwaynihii midowgii Soviet (USSR).
1973 – 1974 waxa uu ka hawlgalayey xafiiskii hawlgelinta ee Raxanta Diyaaradaha duqaynta Soomaaliya ee ku taallay Afisyooni ee magaalada Muqdisho.
1974 waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hawlgelinta ee xafiiskii Raxanta Diyaaradaha duqaynta Soomaaliya ee magaalada Baydhabo.
1975 waxa uu noqday ku-xigeenka sarkaalka hawlgelinta ee saldhiggii diyaaradaha dagaalka ee Balli-doogle
1977 waxa uu ka mid ahaa saraakiishii duuliyayaasha diyaaradihii ka qayb galay dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Etiopia, isagoo markii dambena diyaaraddiisii oo lagu toogtay Jig-jiga iyadoo gubanaysa uu kaga booday garoonka diyaaradaha ee Hargeysa oo uu ka badbaaday…….. lasoco qaybaha danbe